(1955-10-28) အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၁၉၅၅ (အသက် ၆၄)
ဥက္ကဌနှင့် Branded Entertainment Network တည်ထောင်သူ
ဥက္ကဌနှင့် TerraPower ပူးတွဲတည်ထောင်သူ
ဥက္ကဌနှင့် Cascade Investment တည်ထောင်သူ
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလမှ စ၍ ဘီလ်ဂိတ်စ်သည် မိုက်ခရိုဆော့ဖ်၏ စီအီးအို အဖြစ်သာ ဆက်လက် လုပ်ကိုင်တော့သည်။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်၏ ဥက္ကဋ္ဌ နေရာအဖြစ်ဆက်လက်နေပြီး၊ အဓိကဆော့ဖ်ဝဲ ဖန်တီးသူ နေရာကို စွန့်လွှတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ ဇွန်လတွင် ဂိတ်စ် သည် မိုက်ခရိုဆော့ဖ်၏ အချိန်ပြည့်အလုပ်မှ အချိန်ပိုင်းအလုပ်သို့ ကူးပြောင်း ပြီး၊ Bill & Melinda Gates Foundation၏ အချိန်ပြည့် အလုပ်သို့ ကူးပြောင်းတော့မည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။
၂.၂ IBM ကုမ္ပဏီ နှင့် စပ်တူလုပ်စဉ်
ဘီလ်ဂိတ်စ် ကို Washington ရှိ Seattle တွင် အဖေ William H. Gates နှင့် Mary Maxwell Gates တို့ထံမှ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ အဖေ William H. Gates သည် အင်္ဂလိပ်-ဂျာမန် လူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ Mary Maxwell Gates သည် စကော့တလန်-အိုင်းရစ်ချ် လူမျိုး တစ်ဦးဖြစ်သည်။ လူလတ်တန်းစားအထက်တန်းလွှာ မိသားစုဖြစ်ပြီး၊ အဖေလုပ်သူမှာ ထင်ရှားသော ရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်သည်။ အမေလုပ်သူမှာ First Interstate BancSystem နှင့် the United Way မှ အုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ သူမ၏ အဖေ J. W. Maxwell မှာ အမျိုးသားဘဏ် ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်တာဝန်ထမ်းခဲ့သူဖြစ်သည် ။
ဘီလ်ဂိတ်စ် ကိုးတန်း (Eighth grade) ရောက်တော့ အမေများအသင်း မှ Lakeside ကျောင်းရှိ ကျောင်းသားများအတွက် အဆင့်မြင့် ပရင်တာတစ်မျိုးဖြစ်သည့် (ASR-33 teletype) (ဆာဗာထိုင်ထားသော ကွန်ပြုတာမှတဆင့် ပရင်တာလှမ်းထုတ်နိုင်သော) နှင့် ၎င်း၏ ဆက်စပ်ပစ္စည်းအဖြစ်သုံးရန် GE ကွန်ပြူတာ တစုံအား ဝယ်ယူရန် ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေး ကျောင်းဈေးပွဲတော် ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဂိတ်စ်သည် GE စနစ်ကို ပရိုဂရမ်ရေးရန် အခြေခံမှစ၍ စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ သူ၏ စိတ်ဝင်စားမှုကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် အတွက် သချာင်္ဘာသာ အတန်းများအား လွတ်ငြိမ်းခွင့် ရခဲ့သည်။
သူ၏ ပထမဆုံး ကွန်ပြူတာ ပရိုဂရမ်အား ၎င်းစက်နှင့် ရေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်း ပရိုဂရမ်မှာ ကွန်ပြုတာနှင့် ကစားရသော ဂိမ်းတစ်မျိုး (tic-tac-toe) ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဂိတ်စ်သည် ယင်းစက်( ကွန်ပြုတာ )အား အတော်လေး စိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီး၊ ဆော့ဖ်ဝဲ ကုတ်နံပါတ်များကို မည်ကဲ့သို့ ပြည့်စုံစွာ မှတ်ထားသနည်း ဆိုသည့်ကိစ္စအား အသည်းအသန် စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။
ထိုပိတ်ပင်မှု၏ အဆုံးတွင် ကျောင်းသားလေးယောက်က CCC ၏ဆော့ဖ်ဝဲ အတွင်းရှိ အဖျက်စနစ်ကလေးများ ကိုရှာပေးပြီး၊ အလဲအလှယ်အနေဖြင့် ကွန်ပြုတာ အသုံးပြုချိန် တိုးပေးခြင်း ကို ပြုလုပ်ခဲ့ရသည်။ တယ်လီနည်းပညာ (Teletype) မှတဆင့် သုံးခြင်းထက် ဂိတ်စ်တို့က CCC ရုံးခန်းများသို့ သွားရောက်၍ FORTRAN,LISP နှင့် အခြားစက်များ၏ စနစ်များ အပါအဝင် ထည့်သွင်း အသုံးပြုထားသော ပရိုဂရမ် အမျိုးမျိုး၏ ကုတ်အရင်းအမြစ်ကို လေ့လာခဲ့ကြသည်။ CCC ကုမ္ပဏီ နှင့် ပက်သက်ချိန်မှာ ၁၉၇၀ ခုနှစ် ထိ ဖြစ်ပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင် ကုမ္ပဏီ သည် စီးပွားရေးလောက မှ ထွက်ခွါသွားခဲ့သည်။
နောက်တစ်နှစ်တွင် Information Sciences, Inc. မှ COBOL ဝန်ထမ်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ လစာများကို ဖော်ပြရန်အတွက် ကွန်ပြုတာ ပရိုဂရမ် တစ်ခုကို ရေးပေးရန် ကွန်ပြူတာအသုံးပြုချိန်နှင့် အခြားသော အဆင့်မြင့် အထောက်အပံ့ ပစ္စည်းများပါပေး၍ ငှါးရမ်းခဲ့သည်။ ဂိတ်စ်၏ ပရိုဂရမ်ရေးနိုင်သော အရည်အချင်းကို ကျောင်းစီမံအုပ်ချူပ်သည့် အဖွဲ့မှ သိရှိသွားပြီးနောက် ဂိတ်စ်က ကျောင်းသားများနှင့်၎င်းတို့၏ အတန်းများကို အချိန်ဇယား ပြုလုပ်ပေးသည့် ကွန်ပြုတာ ပရိုဂရမ်ကို ရေးပေးခဲ့သည်။
ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားဘဝတွင် ဂိတ်စ်က algorithm for pancake ကို တီထွင်ခဲ့ပြီး၊ ၎င်းသည် ဖြေရှင်းမရသည့် ပြဿနာ စီးရီးထဲမှ တစ်ခုကို အဖြေထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းကို သူ၏ ပရော်ဖက်ဆာ တစ်ဦးဖြစ်သူ Harry Lewis ၏ combinatorics ဘာသာရပ် အတန်းတစ်ချိန်တွင် ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့သည်။ ဂိတ်စ်၏ အဖြေကို နောက်ပိုင်းတွင် စနစ်တကျ ပြန်လည်ရေးသားပြီး ဟားဒ်ဗတ်ရှိ ကွန်ပြူတာ သိပ္ပံပညာရှင်Christos Papadimitriou ၏ စာတမ်းနှင့်တွဲ၍ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၎င်းသည် နှစ်သုံးဆယ်အတွင်း အမြန်ဆုံး ပုံစံတစ်ခု အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သည်။ ဂိတ်စ်သည် ဟားဒ်ဗတ်၌ ကျောင်းတက်စဉ်က ကျောင်းစာများအား အစီအစဉ်တကျ လေ့လာခဲ့သည် မဟုတ်ဘဲ အချိန်တော်တော်များများကို ကျောင်းရှိ ကွန်ပြူတာများနှင့်သာ ကုန်လွန်စေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
IBM ကုမ္ပဏီ နှင့် စပ်တူလုပ်စဉ်[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၉၉၁ ခုနှစ် မေလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ဂိတ်စ်က ကုမ္ပဏီ တွင်း မှတ်တမ်းတစ်ခုကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၊ ၎င်းမှတ်တမ်းတွင် Operating System နှစ်ခု၏ အဆက်အစပ်မှာ ပြီးဆုံးပြီ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မိုက်ခရိုဆော့ဖ်သည် Windows NT kernel ထုတ်လုပ်ရန် အားထည့် လုပ်ဆောင်သွားမည် ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။
သို့သော် သူသည် အစောပိုင်းကာလများတွင် ဆော့ဖ်ဝဲတီထွင် ထုတ်လုပ်သူ အဖြစ် တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ပေးခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် မိုက်ခရိုဆော့ဖ်၏ programming ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှု များတွင် ဖြစ်သည်။ TRS-80 Model 100 line တွင် လုပ်နေစဉ် ကတည်းက ဂိတ်စ်သည် ကုမ္ပဏီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အဓိက ရှေးရှု့သော အဖွဲ့ တစ်ခုကို တရားဝင် တည်ထောင်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ သို့သော် ၁၉၈၉ နောက်ပိုင်းတွင် ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်လုပ်မှုများနှင့် ပက်သက်၍ ဦးဆောင်မောင်းနှင်နိုင်မည့် Code ကို ရေးသားခဲ့သည်။၂၀၀၆ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ဂိတ်စ် က ဒီလို နေ့စဉ် နေ့တိုင်း အလုပ်တွေ လုပ်မနေတော့ပဲ လာမည့် နှစ် နှစ်အတွင်းမှာ ပရဟိတ အလုပ်တွေအတွက်ပဲ အချိန်ပိုပေးတော့မယ် လို့ ကြေငြာခဲ့သည်။
ဂိတ်စ်က “ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း”၊ “ပက်သက်ခြင်း” နှင့် “ကျွန်ုပ်တို့” ဟူသော ဝေါဟာရများ၏ အဓိက အဓိပ္ပါယ် နှင့်ပက်သက်၍ ဝေါဟာရ ဆရာ David Boies နှင့် အငြင်းပွားခဲ့သည်။ BusinessWeek ဂျာနယ်မှ ဖော်ပြသည်မှာ “ဂတ်စ် ရဲ့ အစောပိုင်း သက်သေ ထွက်ဆိုချက် တွေမှာ “ကျွန်တော် မမှတ်မိတော့ဘူး” ဆိုတဲ့ ဇဇေဝါ အဖြေမျိုးကိုပဲ ပေးနေတဲ့အတွက် တရားသူကြီး အနေနဲ့တောင် ရယ်စရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက နည်းပညာ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ဥပဒေကို မသိလို့ပါ ဆိုပြီးငြင်းပယ်ချက်တွေပေးတဲ့ အချက်တွေကို ဂိတ်စ် ရဲ့ အဝင်အထွက် အီးမေးလ် တွေက ရတဲ့ သတင်းအချက်အလက် အတိုအထွာ တွေပေါ် မူတည်ပြီး ပြုလုပ်တဲ့ တရားစွဲဆိုချက်တွေ က ပြန်လည် ချေပပြီးသား ဖြစ်နေတယ်လေ” ဂိတ်စ်က နောက်ပိုင်းတွင် ပြောပြသည်မှာ သူ့ရဲ့စကားတွေ၊ အပြုအမူတွေကို ကြည့်ပြီး သူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ ကောင်ကလေးတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ရိုးရိုးလေးပဲ တုံ့ပြန်ခဲ့သည် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
မိုက်ခရိုဆော့ဖ် မှ နားပြီးကတည်းကပင် ဂိတ်စ်သည် သူ၏ ပရဟိတ လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းလုပ်ငန်းများထဲမှ တစ်ခုမှာ ယင်း ဗွီဒီယို အခွေများမှာ အများပြည်သူများအတွက် အွန်လိုင်း မှတဆင့် ကြည့်ချင်လျှင် မိုက်ခရိုဆော့ဖ်၏ Tuva ပရောဂျက် ၌သာ ကြည့် နိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀ ဧပြီလတွင် ဂိတ်စ် ကို Massachusetts Institute of Technology မှ လာရောက်လည်ပတ်၍ ကျောင်းသားများအား ဩဝါဒ စကားပြောကြားပေးရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ ဂိတ်စ်က ကျောင်းသားများအား အနာဂါတ်တွင် ပေါ်ပေါက်လာမည့် ကမ္ဘာကြီး၏ အကျပ်အတည်းများ နှင့်ပက်သက်၍ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။
ဂိတ်စ် မိသားစု အိမ်သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့် နီးစပ်သောအိမ်ကလေးဖြစ်ပြီး၊ Medina ရှိ Lake Washington ကို လှမ်းမြင်နိုင်သော တောင်တန်း ကလေးပေါ်၌ ဆောက်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ဝါရှင်တန်၏ ပြည်နယ် အုပ်ချူပ်ရေးဌာနရှိ အများပြည်သူဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများအရ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှု (အိမ်ယာ နှင့် လယ်မြေ) စုစုပေါင်း သည် ဒေါ်လာ၁၂၅ သန်း ရှိပြီး၊ တစ်နှစ်တာအတွက် ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ အခွန်ငွေ မှာ ၉၉၁,၀၀၀ ဒေါ်လာ ရှိသည်။ ဂိတ်စ်၏ ၆၆,၀၀၀ စတုရန်းပေ (၆၁၀၀ စတုရန်းမီတာ) ကျယ်သော မြေတွင် ပေ ၆၀ ( ၁၈ မီတာ) ကျယ်သော ရေအောက်တေးဂီတစနစ်ပါ ရေကူးကန်၊ စတုရန်းပေ ၂၅၀၀(၂၃၀ စတုရန်းမီတာ)ကျယ်သော အားကစားခန်းမ နှင့် စတုရန်းပေ ၁၀၀၀(၉၃ စတုရန်းမီတာ)ကျယ်သော ထမင်းစားခန်း တို့ ပါရှိသည်။
၂၀၁၀ မတ်လတွင် ဘီလ်ဂိတ်စ်သည် ကားလို့စ်စလင်းမ် ၏ အောက် ဒုတိယ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး နေရာသို့ ကျဆင်းခဲ့သည်။ ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေများများ လုပ်ခြင်းအားဖြင့် လူအများရဲ့ အာရုံစိုက်မှု မြင့်တက်လာမှန်းသိသွားသောအခါ တခြားသူအများရဲ့ သူ့အပေါ်ထားရှိသော မျှော်လင့်ချက်တွေကို စတင်သိရှိလာခဲ့သည်။ Andrew Carnegie နှင့် John D. Rockefeller တို့၏ လုပ်ရပ်များကို လေ့လာခဲ့ပြီး၊ ၁၉၉၄တွင် မိုက်ခရိုဆော့ဖ် ၏စတော့ရှယ်ယာအချို့ကို ရောင်းချ၍ William H. Gates Foundation ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဂိတ်စ်နှင့် ဇနီးသည်တို့ နှစ်ဦးပေါင်းစပ်၍ မိသားစုသုံးခုစာ Foundations များကို တစ်ခုတည်းသော Bill & Melinda Gates ပရဟိတ Foundation ကြီးတစ်ခု အဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာ့ပေါ်တွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အရှိဆုံး လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည့် ပရဟိတ လုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခု အဖြစ် ရှိသည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် Bill and Melinda Gates ဖောင်ဒေးရှင်းသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ၂၈ဘီလီယံ လှူခဲ့ပြီးဖြစ်၍ အမေရိက ၏ ဒုတိယ အရက်ရောဆုံး ပရဟိတ လုပ်ငန်း ကြီး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းဖောင်ဒေးရှင်းကြီးသည် ဝေဖန်မှုတစ်ချို့ကိုလည်း ခံယူခဲ့ရသေးသည်။ ယင်းဝေဖန်မှုမှာ ဤလှူဒါန်းငွေများမှာ ငွေအရင်းအနှီးအများအပြားကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ ထိုရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှာ အမြင့်ဆုံးသော အမြတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း မရှိသေးပဲ ဖြစ်နေသည် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ၎င်းအတွက် ဖြေရှင်းချက်အနေနှင့် ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဆင်းရဲခြင်းကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် လျာထားသော ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများထဲမှ စီးပွားရေးကျဆင်းလာသည့် ကုမ္ပဏီ များတွင် ရင်းနှီးမတည်ပေးခြင်းကို ပြုလုပ်ခဲ့ရသည်။ ယင်း ကုမ္ပဏီများတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်စေသော ကုမ္ပဏီများနှင့် ဆေးဝါး ကုမ္ပဏီများ များပါဝင်ပြီး၊ ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များမှာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့နေခြင်း မဟုတ်ကြပေ။ သတင်းမီဒီယာလောက၏ ဝေဖန်မှုများကို တုံ့ပြန်သောအားဖြင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ၎င်း၏ ရင်းနှီးမတည်မှုများ၊ လှူဒါန်းမှုများအား လူမှုရေး တာဝန်ဝတ္တရားရှုထောင့်မှ ပြန်လည် ဆန်းစစ်ခဲ့ကြောင်း ကြေငြာခဲ့သည်။
၁၉၈၇ ခုနှစ် သူ၏၃၂နှစ်မြောက် မွေးနေ့ မတိုင်မီ နေ့အနည်းငယ် အလိုတွင် ဂိတ်စ်သည် Forbes' 400 ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးစာရင်းစာမျက်နှာများတွင် ဘီလျံနာ တစ်ယောက်အဖြစ် တရားဝင်ဖော်ပြခံရသည်။ မိမိဘာသာ ကြိုးစား၍ အောင်မြင်ခဲ့သော ဘီလျံနာများအနက် ကမ္ဘာ့အသက်အငယ်ဆုံး တစ်ယောက်အဖြစ် ၁.၂၅ ဘီလီယံ ဒေါ်လာ ပိုင်ဆိုင်ပြီး အရင်နှစ်က ပိုင်ဆိုင်မှု ( ပထမဆုံးပွဲဦးထွက်စာရင်းဝင်သည့် အချိန်) ထက် ဒေါ်လာသန်း၉၀၀ ကျော် ပိုခဲ့သည်။တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းမှ ဂိတ်စ်အား နှစ်ဆယ်ရာစုကို ကမ္ဘာ့လွှမ်းမိုးနိုင်ဆုံးသူ အယောက်တစ်ရာ အနက် တစ်ယောက် အဖြစ် သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး၊ ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၅ နှင့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်များ အတွက်လည်း ကမ္ဘာ့လွှမ်းမိုးနိုင်ဆုံးသူ အယောက်တစ်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
Fridson, Martin (2001). How to beaBillionaire: Proven Strategies from the Titans of Wealth. John Wiley & Sons. ISBN 0471416177။
Gates, Bill (1996). The Road Ahead. Penguin Books. ISBN 0140260404။
Lesinski, Jeanne M. (2006). Bill Gates (Biography (a & E)). A&E Television Networks. ISBN 0822570270။
Manes, Stephen (1994). Gates: How Microsoft's Mogul Reinvented an Industry and Made Himself The Richest Man in America. Touchstone Pictures. ISBN 0671880748။
Wallace, James (1993). Hard Drive: Bill Gates and the Making of the Microsoft Empire. New York: HarperCollins Publishers. ISBN 0471568864။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘီလ်_ဂိတ်&oldid=529966" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ ဩဂုတ် ၂၀၂၀၊ ၀၆:၄၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။